Shina: Famonoana Any Am-pianarana Sy Tsy Fahatomombanana Ara-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2017 19:32 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Français, 繁體中文, 简体中文, Italiano, polski, বাংলা, Español, 日本語, English
Misy idirany lalina amin'ny fiarahamonina ireo tranganjavatra ireo, mitovy amin'ny famonoan'i Yang Jia mpitandro filaminana. Araka ny fanambaran‘i twocolds:
Tsy mahagaga raha nikoropaka nangataka an'ireo masoivohom-baovao sy vohikala lehibe ny sampandraharahan’ny fampielezankevitra mba tsy hametraka ireo vaovao ireo eo amin'ny pejy voalohany. Mazava ho azy fa eo ihany koa ny antony avy amin’ilay fampirantiana ao Shanghai araka ny nohazavain'i Kai Pan tao amin’ny china/divide. Na izany aza, manome ny rariny ho an'ny ankizy ve ny governemanta? Mitsikera izany i Twocolds :
Mamintina ny sasany amin’ireo idiran'ny fiarahamonina anatin'ilay “fihetsika mifono valifaty” i Stan Abrams avy amin’ny china/divide, anisan'izany ny aretin-tsaina, ny elanelana eo amin'ny fidirambola sy ny tsy fahampian’ny fanarahamaso. Na izany aza, manamarika i Xu Zhiyong fa samy tsy mamaha ny olana na ny fanafenana azy na ny fanamafisana ny fanarahamaso: